Google dia mamoaka ny tsiambaratelon'ny Google Play amin'ny e-book | Androidsis
Miaraka amin'ny fahatezeran'ny Android, ny Play Store mandray fampiharana vaovao am-polony isan'andro izay miezaka ny ho tonga ny "WhatsApp" vaovao ary ho fampiharana apetraka amin'ny finday avo lenta an-tapitrisany amin'ny tablette sy planeta eto an-tany.
Arakaraka ny fisian'ny fampiharana ao amin'ny Play Store ny henjana kokoa amin'ny fifaninanana, ary ho an'ity ihany, Google dia namoaka boky izay mitondra ny tsiambaratelo hahazoana fahazoana fampiharana amin'ny fivarotana fampiharana anao. Ny anton'ny fisian'ity "boky" ity dia ny fanamorana ny zavatra ho an'ireo mpamorona manana hevitra tsara ary maniry azy hahatratra ny mpihaino faran'izay betsaka. E-boky 81 pejy antsoina hoe Ny tsiambaratelon'ny Fahombiazan'ny App ao amin'ny Google Play.
1 Manomboka amin'ny anarana miafina ka hatramin'ny fahombiazana
2 Ny tsiambaratelon'ny fahombiazan'ny app amin'ny Google Play
2.1 Loha Hevitra ato anatiny
2.2 Avoahy ny App anao
2.3 Kalitao manaraka ny zava-dehibe amin'ny Google Play
2.4 Ahoana ny fomba hitondranao ny fampiharana anao amin'ny mpihaino marobe
2.5 Ampandraiso anjara amin'ny fampiharana ilay mpampiasa
2.6 Mividiana vola sy maka tombony
2.7 Google Analytics hanampy anao
2.8 Manerantany avy amin'ny tsena eo an-toerana
2.9 Loharano manampy
Manomboka amin'ny anarana miafina ka hatramin'ny fahombiazana
Taona vitsivitsy lasa izay, fandefasana rindranasa izay nanana hevitra tsara, novolavolaina tsara ary nanana ny tsy fitoviana hanavao izany amin'ny vaovao, namela azy hanatratra mpampiasa bebe kokoa tao anatin'ny fotoana fohy, saingy androany, ny repertoire an'ny fampiharana ao amin'ny Play Store dia saika tsy manam-petra. Andro vitsy lasa izay dia teo amin'ny forum mpamatsy vola aho ary afaka nanamarina ny fomba efa ho 3/4 amin'ireo orinasa mitady famatsiam-bola no mamorona fampiharana ho an'ny Android sy iOS, noho izany dia hitanao ny maha-ivon-tsakafo sy fampiasam-bola azy izao ny fivarotana virtoaly.
Ny tsiambaratelon'ny fahombiazan'ny app amin'ny Google Play
Ny tsiambaratelo hahomby amin'ny fampiharana ahitana pejy 81 ary tsy miditra amin'ny kaody ny fampiharana na ny fomba fikirakirana ny zava-drehetra manodidina ity orinasan-tserasera ity, fa manandrana manome torohevitra sy tetika tsara ho an'ireo mpamorona fampiharana.
Ny boky dia manarona lohahevitra maro izay mahaliana hevitra manokana telo: fanaovana ireo fanaingoana samihafa ao amin'ny Google Play, mamolavola fampiharana avo lenta ary izany dia mampifandray ny mpampiasa sy ny fomba hahazoana vola amin'ny fampiharana. Betsaka ny pejy natokana ho an'ny Design Material, ny endrika isan-karazany amin'ny sehatra samihafa toa ny famantaranandro marani-tsaina sy ny fahitalavitra, ny fandikan-teny ho an'ny mpihaino manerantany, ny fitsapana ary ny fanaparitahana ny fampiharana, ny torolàlana Google Play ary maro hafa.
Avoahy ny fampiharana anao
Tanjona: kalitao ary araho ny tena ilaina amin'ny Google Play Store
Hatsarao ny haben'ny fampiharana
Tazomy ary ampifandraiso ireo mpampiasa
Manaova vola sy mampitombo ny vola miditra
Mandrefy izay zava-dehibe ary manaova fanapahan-kevitra lehibe amin'ny Google Analytics
Mahaiza manerantany amin'ny loharano eo an-toerana
Avoahy ny App anao
Ity misy singa samihafa avy amin'ny antony tokony hanelezana ny fampiharana anao ao amin'ny Play Store, torohevitra ao ny fomba ahitan'ny mpampiasa fampiharana ao amin'ny magazay, na izahao toetra ny fampiharana miaraka amin'ireo mpampiasa hahazoana valiny sarobidy. Ataovy ao an-tsaina fa mpampiasa 1000 lavitrisa mahery no ho afaka hametraka ny rindranasao amin'ny fotoana iray, saingy zava-dehibe ny hahafantaran'ny mpamorona ny fomba fikirakirany ny fiasan'ny console developer. Zavatra manan-danja lehibe.
Ity iray ity console dia mamela statistika fanaraha-maso, tantano ny dingana beta sy alpha ary mahazo torohevitra momba ny fanatsarana aza ary afaka mamaly ny hevitry ny mpampiasa. Ity fizarana ity dia mifantoka amin'ny console, ary izay voalaza, ilaina amin'ny app anao.
Kalitao manaraka ny zava-dehibe amin'ny Google Play
Ny kalitaon'ny fampiharana dia midika hoe mitazona ny mpampiasa hampiditra azy ao anaty fampiharana sy hampiasa azy io. Ity fizarana ity ao amin'ny e-book ampianaro ny fomba hampitomboana ny marketing sy hitondrana kalitao avo indrindra azo atao amin'ny fampiharana anao. Amin'ny ankapobeny dia manarona ireo fitaovana, toro lalana ary fomba fanao mety indrindra. Tonga eto ny Material Design, ny lamina famolavolana Android Lollipop vaovao ary ny fomba fitondrana azy amin'ny fomba mety indrindra amin'ny fampiharana anao. Raha efa manana rindranasa ao amin'ny Play Store ianao, fizarana ilaina.
Ahoana ny fomba hitondranao ny fampiharana anao amin'ny mpihaino marobe
Fizarana iray ahafahanao mianatra momba ireo fitaovana sy fomba fanao tsara indrindra hampitomboana ny tombom-barotra. Tonga ity a endrika tsara indrindra ho an'ny takelaka, mampiroborobo ny fampiharana amin'ny Google Search, YouTube sy karazana fampiharana hafa, fandikan-teny matihanina na fampiasana Google+ ary koa tambajotra sosialy hafa hanitarana ny tombony sy ny hatsaram-panahin'ny fampiharana anao. Ny tetika hafa dia fihenam-bidy amin'ny fampiharana na amin'ny daty manokana aza dia manome azy mandritra ny andro maromaro. Repertoire tsara momba ny hevitra sy ny torohevitra hahatratrarana mpampiasa bebe kokoa.
Ampandraiso anjara amin'ny fampiharana ilay mpampiasa
Hitan'izy ireo ny fampiharana, apetrany, zahao voalohany, tiany izy ireo ary mbola mijanona ho azy ireo ny mampiasa azy isan'andro. Nefa ahoana no anaovana izany? Ao amin'ity fizarana ity dia lisitr'izy ireo ny lisitr'ireo fiasa Android sy Google izay afaka manampy amin'io lafiny io satria ao anatin'ny ampahany lehibe hafa izahay ary izany dia ny fampiasana ilay fampiharana isan'andro, iray amin'ireo tanjon'ny mpamorona fampiharana tsirairay. Misy fomba samihafa, avy amin'ny inona ny rafitra fampandrenesana manankarena, ny fampiasana ny Lalao Google Play, mitondrà fampiasa bebe kokoa amin'ireo fitaovana Android Wear hafa na ampiasao ny sehatra Google+ hanatsarana sy hanaingoanao manokana ilay fampiharana.
Mividiana vola sy maka tombony
Nandalo ny fampiasana isan'andro ny fampiharana izahay, ankehitriny dia mbola mahazo tombony amin'ny fampiasana ilay app ihany. Misy safidy maromaro ahafahana misafidy modely sahaza ho an'ny fampiharana, toy ny be mpampiasa indrindra, manolotra ny fampiharana maimaim-poana, ary Andiana safidy Premium amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola ao anatin'ny fampiharana. Misy ihany koa ny famandrihana isam-bolana amin'ny serivisy izay manolotra na mampiseho doka ao anaty ny app mba hanafoanana azy amin'ny micropayment hafa.
Google Analytics hanampy anao
Mba hanatsarana ny fampiharana sy ny vola azony dia zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba ahitan'ny mpampiasa ny fampiharana, ny fahombiazan'ny marketing ary ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana raha vao apetrany. Ny fampiasana ny Google Analytics no lakile afaka mamorona rindranasa tsara indrindra misy kalitao avo lenta ary avy eo mamadika azy ireo ho tombony ho an'ny developer. Ny fizarana voalohany dia hampianatra ny mpamorona hanisy tsipika kaody hamaha ny herin'ny Google Analytics hampiasa ny angona nomeny mba hamoronana rindranasa tsaratsara kokoa sy hianarana ny fomba hanaovana izany.
Manerantany avy amin'ny tsena eo an-toerana
Fahalalana momba ny filan'ny mpampiasa eo an-toerana amin'ny fireneny manjary ilaina ny afaka mitondra ny app amin'ny tsena manerantany. Ny tsena manerantany dia midika mpampiasa mpampiasa an-tapitrisany sy an-tapitrisany maro, saika ny masomboly masina an'ny mpamorona fampiharana. Ity boky elektronika ity dia mitondra tetika amin'ny fahasamihafana amin'ny tsiron'ny mpampiasa ny lalao amin'ny tsena Andrefana na ny tsena Aziatika, mba hilazana ny iray amin'ireo ohatra voalaza, satria ny fandikan-teny matihanina dia dingana iray hafa hitondrana ny fampiharana amin'ny faritra rehetra eto an-tany.
Ary farany, Google nandefa a andiana rohy mankany amin'ny loharano lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fampiharana mifandraika amin'ny mpamorona:
Azonao atao ny misintona ny torolàlana amin'ny PDF na mividy azy maimaim-poana Google Play.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Google dia mamoaka ebook miaraka amin'ny tsiambaratelo mba hahomby amin'ny fampiharana iray ao amin'ny Google Play